Indlu eseduze nesiteshi saseShimonada kanye nesiqhingi seCat.
伊予市, 愛媛県, i-Japan
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Minmi
Itholakala imizuzu emithathu ngemoto noma imizuzu engama-20 ngezinyawo usuka esiteshini saseShimonada (Isiteshi saseKushi siphinde sibe yimizuzu eyi-13 ukusuka lapho), le ndlu evalekile inokubukwa kolwandle futhi iseduze kwendawo yokudlela yokudla kwasolwandle kanye nesitolo esilula.
Indawo yokupaka iyatholakala ezivakashini ezinezimoto zazo futhi, kulabo abayidingayo, umsingathi uzolanda izivakashi esiteshini, mahhala. Kuyenzeka futhi uhambe kalula uye esiqhingini sase-Aoshima, esidume ngokuba namakati amaningi.
Ukubhukha okwendlu yonke, enegumbi lezihambeli ezifinyelela kweziyisithupha.
Indlu iyizitezi ezimbili, esanda kulungiswa. Isitezi esiphansi sinekhishi eligcwele, igumbi lokugezela elinobhavu wokugeza kanye neshawa, nendawo yokuhlala ebanzi. Phezulu kunamagumbi okulala amabili anethezekile kanye nendlu yangasese. Wonke amagumbi okulala anezitezi ze-tatami futhi eza nama-futon azolala kuwo. Le ndlu ingaqashiswa indlu yonke.
Ukwakhiwa kuzoqala ngo-April phambi kwendlu.
Umsindo wokwakha uzokwenziwa kusukela ekuseni. Ngiyaxolisa nganoma yikuphi ukuphazamiseka, kodwa ngicela wenze ukubhuka ngemva kokuvuma.
Ngokuya ngohlelo lwami lomsebenzi ngijabule kakhulu ukukusiza nganoma yini oyidingayo.
UMinmi Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: M380007381
Izilimi: 日本語, Español